Ciidamo Itoobiyaan ah oo ka tirsan AMISOM oo la geeyay Dhuusamareeb, Sababta,? – Hornafrik Media Network
Ciidamada Howlgalka Midowga Africa ee AMISOM ayaa markii ugu horeysay la geeyay magaalada Dhuusomareeb ee gobolka Galgauud, iyagoo fariisimo ka sameystey bartamaha magaalada iyo hareeraheeda.
Magaalada Dhuusomareeb ayaa waxaa hore u joogay ciidamo ka tirsan Ethiopia oo aan ka tirsanayn Howlgalka AMISOM, Waxaana la xaqiijiyay in hadda ay Ciidamadaasi ka baxeen Magalaadda, kuna wareejiyeen Isla Ciidan kale oo Itoobiyaan ah oo wata Calaamadda Midowga Afrika.
Ciidamadii Ethiopia ee ka baxay dhuusamareeb ayaa mudo dheer halkaasi ku sugnaa, waxaana ay ahaayeen Ciidan aan ka amar qaadan AMISOM iyo Dowladda Somalia toona, lagana amrayay Addisababa.
Xubno ka tirsan Maamulada Galmudug iyo Ahlsunna oo magacyadooda ka gaabsaday ayaa sheegaya in arintaan ay salka ku heyso wadahalo dhaxmaray Maamulada looga kala Arimiyo Magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb ee Galmudug iyo Ahlsunna.
Galmudug ayaa adeegsaneyso Xeelado Siyaasadeed oo ay ku raadineyso mideynta labada Maamu,l inkastoo aysan aheyn Wax-fudud iyo Waqti dhaw in lagu qanciyo Wadaadada Maamula Dhuusamareeb iyo Guriceel inay ku biiraan Galmudug.